Global Voices teny Malagasy » Ireo bilaogera nanohitra ny fanakorontanan’ny mpandroba tamin’ny 1 Mey · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2018 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Mankalaza ny voalohany Mey isan-taona ny Foiben'ny Vondron'ny Mpiasa  (CUT), manerana ny tanàndehibe ao amin'ny firenena. Tao Santiago, nanomboka vao maraina niaraka tamin'ireo mpiasa rehetra ny diabe am-pilaminana tany Alameda, iray amin'ireo làlana lehibe indrindra ao an-drenivohitra. Nandray fitenenana avy eo ny solontena ambonin'ny CUT, Arturo Martinez izay nifantoka tamin'ny olan'ny rariny ara-tsosialy sy ny demokrasia. Nasaina avokoa ny manampahefana rehetra. Natao teo anoloan'ny tranobe Diego Portales  tao afovoan-drenivohitra ny fihetsiketsehana. Natao tamim-pilaminana ny hetsika iray manontolo .
Nanoratra ny Mi verdad, tu verdad, la verdad  hoe “… ary nanomboka ny fandrobana sy ny fanimbana ( ny Burger Inn sy ny McDonald's hatrany aloha no hanombohana izany, nahoana?). Ary nilaza ny fahitalavitra fa nanasa tena ireo mpandroba …” Manana lohateny tena tsara momba ity olana ity ao amin'ny bilaoginy i Sebastián Torres  : “Andron'ny mpiasa sa andron'ny jiolahimboto ?????” Nilaza ihany koa izy fa ho henjehin'ny manampahefana ireo tompon'andraikitra tamin'izany.
Amin'ny fomba fijery lalindalina kokoa, nanoratra i Sociolrock  hoe “Tsy mihevitra ny olona iray ho maherifo aho rehefa miafina ao anatin'ny olona izy ireo mba hitoraham-bato, ary mampiasa ny olona ho ampinga . Izany dia maneho amintsika ny fahaverezan'ny fanajana sy ny fahamendrehana manoloana ny olon-kafa ary mampiseho ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao eo anivon'ny fandaminana, satria fantatsika fa tsy manana antony ara-politika; fa hetsika tsy nampoizina fotsiny ihany ity herisetra ity . “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/24/130918/
 Foiben'ny Vondron'ny Mpiasa: http://en.wikipedia.org/wiki/Unifed_Workers%27_Centre
 Diego Portales: http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Diego_Portales
 Mi verdad, tu verdad, la verdad: http://miverdadtuverdadlaverdad.blogspot.com/2006/05/hoy-fue-un-dia-feliz-lara-lara-lara.html
 Sebastián Torres: http://spaces.msn.com/torressebastian/Blog/cns!E5837351473F4F21!1312.entry